Burcad-badeed Soomaali ah oo qafaalatay markab shidaal siday oo ku soo wajahnaa biyaha Soomaaliya. – Radio Daljir
Burcad-badeed Soomaali ah oo qafaalatay markab shidaal siday oo ku soo wajahnaa biyaha Soomaaliya.
Luulyo 18, 2011 12:00 b 1
Galkacyo, July 18 – Burcad-badeedda Soomaalida ayaa xeebaha waqooyi ee bad-weynta Hindiya ka afduubtay markab nooca shidaalka qaada ah oo sida la tilmaamayo ku soo jeeday xeebaha dalka Soomaaliya.
Markabkaan oo lagu magacaabo MB-JUBBA-XX, ayey burcad-badeeddu gacanta ku dhigeen aroornimadii hore ee shalay sida ay wararku tilmaamayaan kuwaasi oo aan illaa iyo haatan si rasmi ah loo caddaynin halka ay ula jahaysteen.
Markabkaan ayaa waxaa saarnaa 16 shaqaale oo u kala dhashay waddamo badan oo adduunka ah ayna ka mid yihiin dalalka Soomaaliya, Suudaan, SriLanka, Kenya, Bangladesh, Hindiya iyo dalal kale, mana jiraan warar caddaynaya xaaladdoodu sida ay tahay iyo waxa soo gaaray xilligii afduubka dhacayey toona.
Warka la-xiriira afduubashada markabkaan oo laga soo xigtay saraakiisha NATO ee illaalada ka haya xeebaha Soomaalida iyo kuwa kulaalaba ayaa intaasi ku darayaa in markabkaan uu ka soo ambabaxy waddanka isku-tagga imaaraadka carabta.
Falalka burcad-badeedda ayaa la tilmaamayaa muddooyinkaan dambe in ay sii kordhayaan xilli dunidu ay waddo dadaal lagula dagaallamayo burcadda, waxaana war-bixin toddobaadkii hore ay soo saartay xarunta badaha caalamiga ah iyo arrimaha maraakiibta ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ay sheegtay 36% weerarada burcaddu in ay kor u kaceen sannadkaan 2011-ka.